Ogaden News Agency (ONA) – Isu-duwaha jaaliyadaha Bariga Dhexe oo ka qaybgalay shirkii Jaaliyadda Sacuudiga faraca Riyadh
Isu-duwaha jaaliyadaha Bariga Dhexe oo ka qaybgalay shirkii Jaaliyadda Sacuudiga faraca Riyadh
Posted by ONA Admin	/ January 19, 2013
Waxaa shirkoodii caadiga ahaa isgu yimid jaaliyada S.Ogadenya ee Sacuudi Carabiya faraca Riyaad. Shirkan bilaha ahaa ayaa la qabtay markaay maalintii 18/1/2013 waxaana ka soo qaabgaley bulshada ku dhaqan Riyaad qaybaheeda kaladuwan.
Sidii caadada ahayd waxaa lagufuray shirka aayadu quraanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo ku saabsanaa halganka xaqqa ah ee umadda Somalida Ogadenya ay kaga soo horjeedaa dulmiga gumaysiga iyo fadliga uu leeyahay qofka jihaadkaa xaqqa ah ka qaybqaata. Wacdigaa diiniga ah kadib waxuu gudoomiyaha jaaliyadda uu ku soo dhoweeyay isuduwaha jaaliyadaha Bariga Dhexe oo shirka kala soo qaybgalay jaaliyadda mudane C/lahi Axmad (ciraaqi) oo u soo jeediyay xubnihii shrka fadhiyay warbixin dheer oo uu kaga xog-waramay meesha uu marayo halganka xaqa ah ee lagu xoreeynaayo dalka Ogaadeeniy ee JWXO ay hogaaminaayso. Wuxuu isu-duwaha ka xogwaramay xaaladihii ugu dambeeyay gudo iyo dibadba, isagoo si fiica u faahfaahiyay shiqoolada cadowgu maleegaayo iyo sidii looga feejignaan lahaa iyo sidii loo ilaalin lahaa midnimada umada oo gumaysi kalkaalka ay doonayaan inay kala dhantaalaan. Wuxuu mudane Ciraaqi kula dardaarmay jaaliyadda in la’is garabtaago halganka xaqa ah ee Ogaadeeniya lagu xoraaynaayo.
Gabagabadii shirka waxaa la go’aansaday in hiil iyo hooba la’isla garbtaago halganka xaqa ah ee gudaha iyo dibadaba ka socda. Waxaay xubnihii shirka isug yimid hambalyo iyo amaan u soo jeediyeen N/hura-yaasha u taagan xoriyada dalka hooy habeen iyo maalin iyo dhamaan dadka sida hagar la’aanta ah u garab taagan N/hurayaasha meel ay joogaanba ee jecel xoriyada Ogaadeeniya. Waxaay canbaareeyeen gumaaysiga iyo cid walba oo garab ku siisa dhibaatada uu gumeeysiga ku hayo shacabka Somalida Ogadenya. Waxay Ilaahay uga baryeen inuu Ogaadeeniya ka xoreeyo gumaysiga.